Tularemia: chii uye chii ngozi?
Tularemia - a asi ngozi zvirwere zvinotapukira. Pathogenic tusingaoneki sei zvikurukuru kuti nhengo dzinobudisa maitiro uye ganda, kashoma kuti kutambura zvemapapu uye conjunctiva. Nokuda kwaizvozvi chirwere zvikuru chinotapuriranwa, mibvunzo pamusoro sei tularemia ari kufambiswa, chii uye sei ngozi ezvinhu akadaro, kuva akakodzera. Saka chii tiri zviratidzo chirwere uye chii kurapwa zvinoshandiswa pakurapa kwemazuva ano?
Tularemia Chii uye nei ikoko?
Sezvambotaurwa, chinhu zvirwere yakakonzerwa bacillus tularemia. Zvinokosha kucherechedza kuti utachiona uyu akaomarara chaizvo uye zvinogona kuramba tichishingaira kunyange munharaunda nekaupenyu utsinye.
Most asingatani chirwere ichi nemakonzo, tsuro, makwai uye dzimwe mhuka. Utachiona kupinda muropa hwemhuka nenguva kuruma vamwe mhando zvikwekwe. Zvisinei, murume, hutachiwana hweHIV pamusoro kuonana mhuka hosha, somuenzaniso nokuita skinning kuzvitunha, ganda kubviswa, kuunganidzwa kwemari nemakonzo uye t. D. Mukuwedzera, panobva chirwere chinogona mvura kwakasvibiswa utachiona. Kurimwa ezvinhu uye zvinoita kusvibiswa kuburikidza kufema hurongwa. Asi kubata chirwere kubva munhu kashoma.
Chero zvazvingava, munhu wacho zvikuru inonyatsoziva siyana kwemabhakitiriya zvirwere.
Tularemia - chii uye chii ayo chikuru zviratidzo?
Sezvataurwa pamusoro apa, pathogenic tusingaoneki sei zvikurukuru kuti node nodes uye ganda. The chirwere ane zvakasiyana chimiro uye yakasiyana zvikuru dzinoratidzwa zviratidzo. Zvisinei, pakutanga nguva dzose chete - munhu tembiricha inokwira kusvika 38-40 inegumi. Fever angava undulating (i.e. -buda, ipapo akazviratidzazve zvakare), kana kuuya dzose. Zvakakomba nomusoro, muviri pari, kugara kuneta - zviri zvakare zviratidzo tularemia rokutanga.
Kana utachiona kupinda muviri kuburikidza paganda, achinyanya zvinokanganisawo node nodes - vanonzi bubonic chimiro chirwere. Zvinonzi pamwe kuzvimba inguinal, axillary kana femoral limfozulov.
Mune zvimwe zviitiko, ganda mapundu, uye maronda dzimwe nguva diki. Kana zvinokanganisawo mucous membranes zvameso yakatanga purulent conjunctivitis. Kana utachiona hwapinda mumuviri kubudikidza huro, ipapo pane kuzvimba dokeriro uye tonsils, kwazvo huro, zvakaoma kumedza.
Tularemia: chii uye chii vari kurapa?
Chokwadi, mishonga rinoitwa bedzi muna muchipatara muzviruva. Varwere vari Nachiremba nemishonga, izvo zvinosanganisira mishonga inorwisa mabhakitiriya. Zvikuru inobudirira vanoonekwa "streptomycin yakawanikwa", "Doksitsklin" uye "Chloramphenicol" uye vamwe cephalosporins. Uyezve, symptomatic kurapwa - varwere ushandiswe antipyretics, analgesics uye Anti-anogumbura zvinodhaka.
Kana dziviriro, vanhu vanokurudzirwa kuita pachake kudzivirira zviyero okuvhimisa uye kubudiswa nezvitunha mhuka; unofanira kudzivisa kushandiswa mvura kubva yakasvibiswa manyuko, uye usarera kupisa kurapwa mitemo kuti nyama zvigadzirwa. Uyezve, mune dzimwe nzvimbo zviri fanira kubaya pamusoro tularemia, izvo zvinopa kutapata simba kwazvo makore mashanu.
Zvinokosha kucherechedza kuti nehosha zvakadaro kuzvidzosera kuva kuzvipira medicate. Tularemia kunogona kukonzera matambudziko akakura, akadai arthritis, yomumuzongoza, encephalitis, mabayo uye chirwere uye muchetura kuvhunduka.
Manyoka mu vacheche - ndozvakajairwa kana chiratidzo chirwere?
Mishonga nokuti kuzvimba node nodes. Ndezvipi mishonga yokurapa zvimba node nodes
Sei kuzvimba maoko netsoka?
Dolichosigma bowel: Zviratidzo neMarapirwo
Hemolytic-uremic chirwere - chii?
Sei stomatitis ari mwana; zviratidzo uye zvinokonzera
Soviet uye Russian mutori Gusman Mihail: Biography, mabasa uye zvinonakidza zvinhu
How kusarudza ruomba kuti jikichira ganda?
Top mutikitivha dzakatevedzana - gakava kuravira
Chirimwa pamusoro aikanganiswa nemishonga: inopangidza. Aikanganiswa nemishonga: musimboti wenyika ongororo
Sergio Martinez: rakajeka basa pamwe kundikana kupera
Kuronga chikuru kusiyana pakunamata zviri zvinhu. Material uye pakunamata
"Rengalin" kukosora: mirayiridzo kushandiswa uye analogues
Eggplant pamwe madomasi nokuti chando: yacho resipi. How kugadzirira chando inonaka appetizers ose eggplant pamwe madomasi?
How kurapa huro
The yakanakisisa doro maresitorendi muSt Petersburg: yacho rating, tsananguro uye wongororo